Ogologo oge ole ka azụ si eri na-enweghị eri → Choputa ebe a | Azu
Carlos Garrido | | Azụ azụ
Ugbu a, e nwere ọtụtụ anụ ụlọ anyị nwere ike ịchọta dị ka nhọrọ iji bụrụ ndị enyi maka ndụ na isoro anyị biri n'ụlọ. N'ime nhọrọ ndị a niile, azụ bụ otu n'ime anụ ụlọ ndị kachasị ewu ewu.
Animalsmụ anụmanụ ndị a nwere enyi eruola ewu ewu dị otú ahụ n'ihi na, n'ezie, ha anaghị achọ nlekọta gabigara ókè, agbanyeghị, ị ga-elebara anya n'ụzọ ụfọdụ dị ka nri. Ma ọ bụ, Ogologo oge ole ka azụ ga-eri n’erighị nri?
Azịza nye ajụjụ a bụ n'ezie ịgbasa na oge akọwapụtabeghị oge. N'ime edemede a niile, anyị ga-anwa ịlele okwu a, na-enye ndụmọdụ na ngwaahịa dị iche iche anyị nwere ike ịnwe n'oge anyị nwere ike ọ gaghị ekwe anyị omume ịzụ obere ndị enyi anyị, ka emechara, nri ha ga-adabere otele azu ka ndu.
1 Ubọchi ole ka azụ ga-eri n’erighị nri?
2 Mgbaàmà na omume nke azụ na-agụ agụụ
3 Ndụmọdụ maka azụ iji gaa ogologo oge n’erighị nri
4 Kedu otu esi egbochi azu anyi iri nri?
Ubọchi ole ka azụ ga-eri n’erighị nri?
Dị ka m kwuru na mbido, a maghị kpọmkwem ụbọchị azụ̀ ga-ata ah u n’erighị nri. Gịnị kpatara ya? Ọ dị mfe. Oge a dabere n’ihe dị iche iche, dịka ụdị azụ a na-ekwu maka ya, ọnọdụ ahụike azụ ahụ, nlekọta ọ natara na mbụ, ọnọdụ mmiri ọ bi na ya, nri ya niile gara aga, wdg.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na enwere ike ịme atụmatụ. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, azụ nwere ike ị gaghị eri nri maka ihe dị ka ụbọchị 2-3. Ozugbo oge a gafere, anụmanụ ahụ ga-egosiputa adịghị ike ụfọdụ, nke ezi uche dị na ya n'otu aka, na enweghị nri na nri ga-eme ka ihe nchekwa ahụ daa nke ukwuu. Ọnọdụ a na-etinye ahụike nke anụmanụ ahụ n'ihe egwu ma na-ebute oke ohere nke azụ na-ebute ọrịa na, ya mere, ọnwụ.
O nwere oge anyị nwere ike ịnụ etu esi akọ ya nke ọma na azụ nwere ike ịga ihe ruru otu izu n’erighị nri. Adị ụdị ihe a nwere ike ime, mana ọ bụ ihe siri ike, yabụ ana m enye gị ndụmọdụ ka ị ghara ịtụkwasị ya obi.
Ọ bụrụ na ị ga -anọ ihe karịrị ụbọchị 2 ma ọ bụ 3, azịza bara uru bụ nzọ na feeder akpaka, yabụ na azụ agaghị agwụ nri n'oge anyị na -anọghị.
Mgbaàmà na omume nke azụ na-agụ agụụ
Ọ bụrụ na, maka ihe ọ bụla, azụ anyị eribeghị nri ruo oge ụfọdụ, ọ ga-egosi usoro mgbaàmà dị iche iche nke ga-abụ ihe mgbaàmà ịdọ aka na ntị iji mee ihe ozugbo enwere ike.
Na mbu, oburu na azu di na nri, anyi g’eme ya omume ha na-ezu ike karịa ka ọ dị na mbụ, ha na-arịgo ọtụtụ oge gaa n'akụkụ elu nke mmiri ahụ na-achọ nri. N’ikpeazụ, ha na-echegbu onwe ha.
Ọzọ, usoro mgbaàmà ọzọ na-ebilite nke na-anaghị emetụta omume nke ukwuu, kama na-eme ihe banyere anụ ahụ nke anụ ahụ wee pụta mgbe usoro ụnwụ ahụ gaferela. A na-ahụ ha karịa na anụ na akpịrịkpa gị, nke na-efunahụ ncha na agba, oge ụfọdụ na-eweta ọdịdị dị njọ karịa..
N'ikpeazụ, ekwesịrị ịdeba ama na mgbe nri dị ụkọ ma ọ bụ na-enweghị isi, azụ nwere ike ịgafe usoro nchekasị dị otu a, nke na-amanye ha ma na-akpali ha itinye aka na akparamagwa nke iri anụ mmadụ, ebe ọ bụ na ha anaghị achọ nri. ha ga-enwe ike wakpo ma gbuo ndị ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na anyị ahụ ọtụtụ azụ na aquarium anyị nwere ọnya na ntù na ọdụ ma ọ bụ azụ na-apụ n'anya na-enyo enyo, ọ bụ ihe ịrịba ama na ihe anaghị aga nke ọma.
Ndụmọdụ maka azụ iji gaa ogologo oge n’erighị nri
N'ezie, ọ dị aghụghọ ole na ole dị iji mee ka azụ anyị nọrọ ogologo oge ọ ga-ekwe omume na-enweghị iri nri, ebe ọ bụ na ụkọ nri na-eme ka anụmanụ ghara inwe ike ịga n'ihu na usoro ya dị mkpa n'ụzọ ziri ezi wee banye n'ihe egwu dị egwu. Ya mere, ihe kachasị dị irè bụ ịgbalị igbochi azụ anyị ịda ogologo oge ụnwụ, n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ nsogbu na-enweghị atụ na-ebilite nke na-agaghị ekwe anyị omume ịnye ha nri oge ụfọdụ.
Ọ bụrụ na ụdị ihe a emee, enwere ụfọdụ ntụzịaka ma ọ bụ ịkpachapụ anya nke nwere ike inyere azụ anyị aka ịda ntakịrị oge. Otu n'ime ha bụ inye azụ anyị nri dịgasị iche iche n'oge niile nke na-eme ka ha nwee abụba na ume ụfọdụ, nke ahụ na-emekwa ka ha nwee ahụike na ike. Zọ kachasị mma iji mezuo nke a bụ ịkwadebe arụrụ n'ụlọ azụ nri na e wezụga ịdị mfe, ọ ga-azọpụta anyị ego.
M ga -akwadokwa gị zụta onye na -enye azụ azụ akpaka. Site na nke a ị ga -edozi nsogbu ahụ n'ọtụtụ ikpe.
Uzo ndi ozo aghaghi ime, na otutu, na mmiri. Mmiri dị na tankị azụ anyị, aquariums ma ọ bụ ọdọ mmiri ga-adị ọcha dị ka o kwere mee. Ọ bụrụ na anyị emee nke a, anyị ga-eme ka ebe obibi nke anụ ụlọ anyị ghara inwe ọrịa na-efe efe, nje bacteria na nje ndị ọzọ nwere ike ịghọrọ ha aghụghọ ma ọ bụrụ na azụ adịghị ike, dịka ọ na-eme mgbe ha eribeghị ọtụtụ awa.
N'ikpeazụ kwa anyị kwesịrị ị paya ntị na ọkwa oxygen dị na mmiri. Akụkụ a dị oke mkpa, ebe ọ bụ na ikuku oxygen bụ isi n'ọdịnihu nke azụ. Mmiri oxygen na-enweghị nri, tinyere ụkọ nri, na-aghọ mmanya na-egbu egbu.
Kedu otu esi egbochi azu anyi iri nri?
O bu ihe nwute, onwere otutu oge anyi na ahapu ulo, dika izu ike, ma anyi enweghi onye na elekota umu anumanu anyi anya.
Maka azụ, ụfọdụ ngwaahịa dị na ahịa nke nwere ike inye nri na akwarium ruo oge ụfọdụ.
Enwere ụfọdụ shells ma ọ bụ mbadambaIhe ndị e ji amata ndị kasị dị ọcha bụ ndị nwere ụcha ọcha, bụ́ ndị a haziri n’ime tankị azụ̀ ndị na-eji nke nta nke nta agbaze, na-ewepụta ihe ụfọdụ ga-abụ azụ maka azụ. Ọ bụ eziokwu na anyị ga-akpachara anya na ha, ebe ụfọdụ ihe ndị ha wepụtara nwere ike ịgbanwe oke mmiri ma mee ka nsogbu dị na ihe anyị chọrọ.
N'otu ụzọ ahụ mbadamba ndị a na-eme ihe osisi ma ọ bụ kuki na anyị na-ahụ na ntọala ọ bụla pụrụ iche na anụ ụlọ. Ha nwere ihu ọma Echere m na etinyere, nke ejiri nwayọ gbanye na mmiri akwarium.
Dịka ihe ikpeazụ, nke nwere ike bụrụ nke kachasị dị irè, enyere anyị aka na azụ nri dispensers. A na-etinye ngwaọrụ ndị a n'elu mmiri, dịka ọmụmaatụ na nsọtụ elu nke tank azụ, ma hapụ nri echekwara na tank ya na ntuziaka dabere na mmemme gara aga anyị mere. Ha bara ezigbo uru ma dị mfe ịchọta. N'ezie, mgbe nri dị n'ime tank ruo ogologo oge ọ na-adị mmiri mmiri ma tụfuo ọtụtụ ihe onwunwe ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Azụ azụ » Ogologo oge ole ka azụ ga-aga n’erighị nri
Daalụ nke ukwuu, n'ezie; Naanị taa ha nyere m otu ma enweghị m nri azụ. Ya mere echi m ga-enwe ike ịzụta ya nwayọ: 3
ezigbo mma nkọwa ekele
Zaghachi Marco Salazar
Carlos Housinglọ dijo
Nkem erighi eri afọ 2, o adighi anwu?
Zaghachi Carlos Vivienda
Ndewo, enwerem azu nwanyi ma ribeghi otu izu ... kedu ihe m ga - eme?
Azụ m eribeghị abalị abụọ ma enwee m azụ 2 ma m na-atụ ụjọ na ha ga-eri ibe ha, na m nwere ike zụọ ha
Ndewo, enwere m ụdị azụ Japan dị iche iche ma ha anaghị eri ma ọ bụ merụọ ahụ ma ha niile bụ ala ala aquarium, kedu ihe m ga - eme? Enwere m olile anya na mmadụ ga-enyere m aka.
Daalụ maka ndụmọdụ m na-atụ anya na azụ m na-adị ndụ ka ọ dara ma ugbu a ọ chọghị iri nri :(
Ọfọn, azụ m eribeghị ọnwa 4 ma ka dị ndụ, enwere ike ịsị na ọ nwere ndekọ Guines.
Ahapụrụ m azụ m na-enweghị nri ma ọ bụ oxygen ruo ọnwa atọ na ọkara, maka ebumnuche nke ike, echeghị m na m hụrụ ha ndụ mana ha nọ, mana ha dị ihe dịka iri abụọ na isii, achọtara m ihe dị ka iri na ise, nke ọma, gị nwere ike iri anụrị m maka ịbụ anụ oriri n'ihi na ahụghị m ihe ọ bụla gbasara ndị ọzọ na oxygen ebe ahụ ma ọ bụrụ na amaghị m etu ha si lafere eziokwu ahụ
Enwere m golf nke na-achọghị iri nri ụbọchị anọ amaghị m ihe ọ ga-abụ t .nkele
Ndewo, oge ụfọdụ gara aga, ruo ugbu a azụ m na-anwụ, ha na-aza aza nke ukwuu na cloaca ha na-enwu ọkụ, achọpụtara m na ụfọdụ na-eri ha, m na-enye ha nri ugboro abụọ kwa ụbọchị ha bụ guppies, m na-agbanwe mmiri kwa izu abụọ ọ bụla 2 / 2 m na-asacha nzacha gị oge ikpeazụ wepụ ihe niile wee sachaa mmiri mgbanwe 3%
Mmiri mmiri oyi